Gabar yahay waxa laguu hayaa tallaabooyinka uusan gacaliyahaaga kaa soo daahi Karin ee raac | Gaaloos.com
Home » galmada » Gabar yahay waxa laguu hayaa tallaabooyinka uusan gacaliyahaaga kaa soo daahi Karin ee raac
Gabar yahay waxa laguu hayaa tallaabooyinka uusan gacaliyahaaga kaa soo daahi Karin ee raac
Haweenku waxa ay markasta ay watigeeda ugu badan ku qaadataa gurigeeda iyadoo ay yaryihiin xaasaka kataga guriga oo shaqada aado , hadaba gabar yahay Shumis.net ayaa talaabooyinka kusiinaysa ee raac waa hubaal in aad kaga guuleysanayso naagaha kale.
Ka dhig gurigaada mid ka bedalan guryaha kale adiga oo ka nashqad ahaan ka gedinaya , waxa ay kuu horseedaysaa in heblaayo gurigeeda ma aragtay lagu dhaho kaliya ma aha in intaa lagu dhaho ee gabar yahay kadhig mid nadiif ah oo gacaliyahaaga ka qeyliyo.
Fadhigaagu ha ahaado mid aanayn ku dhegsanayn derbiga yuusana ahaanin wax tirada kabatay , ka dhig mid jiljileecsan oo l isku tuuri karo xili is bursiga iyo wada baashaalidda .
Jiif kaagu ha ahaado mid usamysan qaabka wadnaha oo kale gogolka korena ha ahaado mid kuburleet kan ugu marada wacan ah hadaba waxa aad macaankaaga ka dhigtay mid usoo urdo guriga .
in tabadan raggu waxa ay aad u jecel yihiin naagta guriga qurxan hadana nadiifka ah , oo marba dhan u yaalla ; waa in aad ogarawsanaato in uu ninku jecel yahay qaabkan naagta sameysa .
Qolka ciyaarta sariirta ha ahaado mid si qaas ah loo qurxiyay derbiyadiisuna ay ku dhegan yihiin ubaxyaallo kala cayn ah oo aad marba dhan aad u bedesho ,gacaliyahaagu wuu usoo ordayaa xilli kasto uu kasoo tago shaqada oo meelo kale makaa aadayo illeen meel qurxan baad u diyaarsatay
Title: Gabar yahay waxa laguu hayaa tallaabooyinka uusan gacaliyahaaga kaa soo daahi Karin ee raac